Dawlad Deegaanka Soomaalida & Tigray da soo Socota – JOORNAAL
Dawlad Deegaanka Soomaalida & Tigray da soo Socota
November 23, 2021 ~ joornaal
“Ninkaan Tashan waa loo taliyaa”
Waxaa jira aduunka gumeysi laba nooc ah.
Mid ka hore ee dadka badan kiisu yaqaanaan waa in lagu gumeysto gumeysi ku dhisan xoog oo laguu isticmaalo ciidamo, hub iyo xoog oo haddii aad ka hor timaado gumeysiga lagu dilo, ama lagu xiro ama lagu masaafiriyo. Gumeysigaas waxaa tusaale kaaga filan midkii dawladii Meles Zenawi Asres ee sanadihii 1991 ilaa 1995 ay ku haysay dadka degan Dawlad Deegaanka Soomaalida.
Waxaa kaaga filan wixii uu wakiilkii Tigray da Abdi Mohamoud Omar (Iley) ku sameyn jirey dadka degan dawlad deegaanka Soomaalida. Iyo sida uu u fulin jirey qorshaha gumeysiga, caburinta, dhaqan burburinta, diin ku ciyaarida, iyo dhamaan in la tirtiro qiimihii iyo sharaftii uu lahaa qofka Soomaaliga. Meesha gobolka Tigrayda ay ka jirtey xoriyad, ganacsi iyo hurumar dhan walba ah sida dhismaha waxbarashada, warshadaha, dhaqanka, taariikhda iyo dhamaan aas aaska nolosha.
Gumeysiga ka daran midka xooga ku saleysan waa gumeysiga maskaxda ah. Waayo Gumeysiga xooga ku dhisan waa wax ku dhisan banaanka wax naftaada kaga baxsan. Tusaale Nelson Mandela xoog ayaa lagu gumeystey ee maskax ahaan looma gumeysan. Maskax ahaan waxaa laguu gumeystey markaad u dareemi weyso cadaalad darada, dhibaatada iyo gumeysiga dadkaaga lagu hayo in ay tahay shay aad u xun oo fircooni ah una baahan in aad ka dagaalanto ilaa aad ka fara baxsato. Gumeysiga maskaxda waxaa uu xidido yeeshaa markaad aqbasho falalkaas tacadiga ah ee lagugula kacaayo naftaada ama dadkaaga in ay yihiin wax fiican oo aan xumaan ahayn. Waa marka hore waxaad iska ogolaaneysaa in shacabkaaga wixii doono lagu sameeyo sida ayagoo kii la doono la dilo, kii la doono la dhaco, kii la doono la xiro, kii la doono xaaskiisa iyo gabdhihiisa la kufsado. Intaas waxaad isku qancineysaa waxaan waxaa sameynaaya madax anaga naga mid ah! Laakiin kaama tirsanee waa gumeysi maskaxdaadi galay in ay kaa tirsanyihiin waayo waxaad aqbashay maskax runtii ah hooskii maskaxdii gumeystaha. Marka ay ka sii xoogeysaneyso oo ka sii dareyso gumeysiga maskaxda waa marka aad aqbasho waxa ay sameynayaan in ay tahay wax sax ah oo ay kaa dhaadhacdo in ay qumantahay. Calaamadaheeda waxaa ka mid ah in aad ka qayb qaadato dhibaatada loo geysanayo dadka la gumeysanayo adigoo ka mid ah ama ka dhashay qowmiyadaas dhibaatadu ku dhaceyso.
Gumeysiga maskaxda si uu u hirgalo waa in maskaxdaada laga dhigaa mid hooskii maskaxda gumeystaha ah (a shadow mind). Waxaa ka mid ah calaamadah gumeysiga maskaxda in adigoo Tigray kaa tiro yartahay aad uga hadasho sida ayagoo kula tiro ah ama kaa tiro badan ama kula xaq ah. In marka aad is babac dhigeyso Dawlad Deegaanka Tigray iyo Dawlad Deegaanka Soomaalida in ay maskaxdaada ka guuxeyso in ay kaa awood badanyihiin, kaana sadbursi leeyihiin marka laga tashanaayo aayaha Ethiopia (Ogow waa qowmiyad kaa tiro yar, kaa xoolo yar, kaan dhul xun, diintii saxda ahayd na ma haysto). Waxaa ka mid ah gumeysiga maskaxda in aad aaminto inuu ninka Tigray ga ah xaq u leeyahay inuu xukumo Ethiopia oo dhan, laakiin adiga aad marti ka tahay xukunka dalka. Markii aad aaminto inuu xaq u leeyahay waxaas aan soo sheegay adiguse aadan xaq u lahayn waxaad isla markiiba aqbashay in aad amarkiisa ka fuliso Dawlad Deegaanka Soomaalida. Haddii uu xaq iyo taariikh u leeyahay inuu xukumo Ethiopia adigana wuu ku xukumi karaa. Soo maahan gumeysi maskaxeed nin aaminay ninka ka yimid qowmiyad ka tiro yar oo buurahaas Makele ka soo degay, oo aan lahayn bad iyo baad iyo weliba walaale kale oo u soo hiiliya sida Somali weyn, Jabuuti iyo Soomaalida Northern Kenya.
Soo maahan gumeysi maskaxeed, in aad maanta markale ka baqdo inuu mar labaad kuu taliyo oo keensado wakiil sidii Meles Zenawi u keensaday Abdi Iley, oo in aad u tabaabusheysato daaye qaar ka mid ah indheer garadkii gobolka ay heshiis hoosta kala xariiqayaan?
Markii gumeystuhu uu maskaxdaada u badelo maskaxdiisa hooskeedi ah ee aan taadii ahayn waxaa ku xigaysa inuu kugu qanciyo in aad qaadato dhaqankiisa, taariikhdiisa, shacabkiisa dantooda. Waxaa imaaneysa markaad rabto in aad ganacsi sameyso in aad ku soo darto nin ayagii ka mid ah. Waxaa ka mid noqoneysa in marka aad ka sheekeyneyso taariikhda dalka in aad tiisa amaanto. Marka dhibaato ay ku dhacdo aad u maleyso dhibaato adiga ku haysa oo aad asaga la gurmato. Ilaa marka danbe aad soo baxdo sanam iyo boombale siduu rabo uu ka yeelo.
Waxaa ka mid ah calaamadaha gumeysiga maskaxda in markii gumeysigaas meesha ka baxo aad dareento maqnaanshihiisa. Waa meesha ugu xun ee uu gumeysi maskaxeed ku gaarsiin karo in aad jeclaato inuu soo noqdo. Waxaa la yaabay in dad badan oo Dawlad Deegaanka Soomaalida ka tirsan ay maanta ku fakarayaan ama jeclaadeen in ay la shaqeystaan gumeystahaas kala dhantaalay noloshooda, xoriyadooda, dhaqankooda, diintooda iyo taariikhdooda.
‹ PreviousSidee Singapore Musuqmaasuqa ku ciribtirtay?